‘मापदण्डअनुसार नै बस सञ्चालन’ - Pradesh Today ‘मापदण्डअनुसार नै बस सञ्चालन’ - Pradesh Today
‘मापदण्डअनुसार नै बस सञ्चालन’
आजदेखि जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आउन लागेका छन् । छोटो दूरीमा यातायात सञ्चालन हुँदै गर्दा अहिले सरकारले असार २६ गते नै जिल्लाभित्र सवारी चलाउन आग्रह गरेपनि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरेका थिएनन् । सरकारले निर्णय गरेको करिब दुई सातापछि सवारी धनी जिल्लाभित्र सवारी सञ्चालनमा ल्याउन तयार भएका हुन् । करिब चार महिनापछि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् । लकडाउनपछि कस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदैछ ? यातायात व्यवसायी, मजदुर गाडी धनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषयमा रहेर नेपाल राष्ट्रिय यातायात महासंघका केन्द्रीय सल्लाहकार सुरेश हमाल सँग कुराकानी गरेका छौँ ।
अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने हो ?
सरकारले हाम्रा मजदुर, व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको थिएन । पछिल्लो समय सरकारले हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेपछि अहिले जिल्लाभित्र सवारी चलाउने निर्णयमा पुगेका हौँ । कोरोनाको जोखिम एकातिर छ,
अर्कोतिर लकडाउन खुकुलो भएसँगै सामान्य नागरिकलाई आवतजावत गर्न समस्या परिरहेको छ । निजी सवारी साधन मात्रै चल्दा लकडाउन सर्वसाधरण नागरिकका लागि जस्तै भयो । अब हामीले घाटा–नाफाभन्दा पनि नागरिकको सहजताका लागि भएपनि सार्वजनिक सवारी चलाउनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।
सवारी भाडा तिनुपर्ने सरकारले तोके अनुसार नै हो ?
हो, एकदम । सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले यात्रुले ५० प्रतिशत भाडा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । जस्तैः घोराही तुलसीपुरमा ५५ रूपैयाँ भाडा छ भने अब यात्रुले ५० प्रतिशत बढी भाडा तिर्नुपर्ने भएको छ । ५५ रूपैयाँमा ५० प्रतिशत बढाउँदा करिब ८२ रूपैयाँ हुन आउँछ । गाडीले कुल क्षमताको आधामात्रै यात्रु बोक्ने छ ।
कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि हामीले सकेसम्म पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानी पर्याप्त मात्रामा अपनाउँछौँ । आजदेखि जिल्लाभित्र सञ्चालनमा आउन लागेका सवारी साधनमा कुनै पनि त्यस्तो कोचाकोचको अवस्था रहँदैन् । यस्तो अवस्थामा हामी ‘आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऔँ’ भन्नेमा छौँ ।
पहिले त यो नियमानुसार व्यवसायी फाइदा हुँदैन् भन्नुहुन्थ्यो त ?
हो, हामीले पहिले यो नियम मानेका थिएनौँ । हामीले गाडीको क्षमताअनुसारको यात्रु बोक्ने भनेका थियौँ । तर कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा यो सम्भव नभएका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमै सवारी सञ्चालन गर्न लागेका हौँ ।
हामीले नाफा, घाटाभन्दा पनि नागरिकको दैनिकीलाई सहजता बनाउनका लागि सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णयमा पुगेका हौँ ।
सुरक्षा र सावधानी कसरी अपनाइदै छ ?
अब सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै सुरक्षा सावधानी अपनाउने छौँ । बसलाई समय–समयमा स्यानिटाइजर गछौँ, यात्रुलाई अनिवार्य मास्कको व्यवस्था गर्छौँ । कुनै यात्रुले मास्क नलागाएको भए हामीले उपलब्ध गराउँछौँ तर मास्कको मूल्य भने यात्रुले नै तिर्नुपर्ने छ । बसको क्षमताको आधामात्रै यात्रु बोक्ने छौँ ।
दाङमा कुन–कुन क्षेत्रमा बस सञ्चालन हुने छन् ?
अहिले विषेशगरी पूर्वमा कालाकाटेसम्म र पश्चिममा हापुरेसम्म भन्ने छ । तर आवश्यकता अनुसार यात्रुहरू हुनुभयो भने जिल्लाका कुना–कुनासम्म पुग्ने छौँ । तर यात्रु बसको कुल क्षमताको आधा संख्या भने अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
श्रमिकको सुरक्षाका लागि के छ ?
श्रमिकको सुरक्षाका लागि अहिले त सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क, ग्लोभ्सको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नै हो । अनि सबै मजदुरहरूको कोरोना बिमा अनिवार्य हुन्छ । काम गर्दै जाँदा कोहि पनि श्रमिक संक्रमित हुन पुगेमा उहाँहरूले कोरोना बिमा प्राप्त गर्नुहुन्छ ।
कति गाडी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
जिल्लामा रहेका आठवटै प्रालिका बसहरू सञ्चालन आउँछन् । आवश्यकता अनुसार हामीले धेरै बस पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ, भने थोरै पनि सञ्चालन हुन सक्छन् । अहिले एकिन छैन्, तर हामीले यात्रुको आधारमा बस सञ्चालन गछौँ ।
दाङमा एकसाताका लागि पूर्ण लकडाउन गरिने
स्थानीय सरकारमा सैद्धान्तिक बेरूजु